मलाई पढ्नुहोस्: आफ्नो डेस्कटपमा गुगल रिडरबाट आरएसएस पढ्नुहोस् लिनक्सबाट
को प्रयोग आरएसएस यो अधिक र अधिक सामान्य हो, विशेष गरी यदि हामी प्रत्येक समाचारहरू अद्यावधिक राख्न चाहन्छौं जुन उनीहरूले हाम्रो मनपर्ने साइटहरू र ब्लगहरूमा राखेका छन्।
त्यहाँ पढ्नको लागि धेरै डेस्कटप ग्राहकहरू छन् आरएसएस, र वेबमा धेरै अन्य मनपर्दछ Google Reader, जुन मैले २ बर्ष भन्दा बढी प्रयोग गरीरहेको छु। तर के हुन्छ यदि हामी उदाहरणको लागि पछिल्लो पहुँच गर्न ब्राउजर खोल्न चाहँदैनौं? यो त्यहि आउँछ जहाँ मलाई पढ्नुहोस्, एउटा अनुप्रयोगमा लेखिएको छ अजगर त्यो चाल Google Reader हाम्रो डेस्कमा।
यसलाई स्थापना गर्न Ubuntu हामी हाम्रो Source.list मा थप्दछौं:
डिब http://ppa.launchpad.net/atareao/atareao/ubuntu नेट्ट्या मुख्य डिब-एसआरसी http://ppa.launchpad.net/atareao/atareao/ubuntu नेटाटी मुख्य
यो पनि उपलब्ध छ कर्मिक, लुसिड, माभेरिक y ओनेरिक.
हामी अपडेट र स्थापना गर्छौं मलाई पढ्नुहोस्.
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install me-read
con मलाई पढ्नुहोस् हामीसँग उही विकल्पहरू छन् गुगल रिडर:
पढिसकेको अंकित गर्नुहोस्।
सबै पढिएको रूपमा चिन्ह लगाउनुहोस्।
तारा (मनपर्ने) थप्नुहोस्।
समाचार अरूमा साझेदारी गर्नुहोस्।
इन्टरफेस एकदम सरल छ, त्यसैले त्यहाँ यस हाइलाइट गर्न केहि छैन।
हामी केवल समाचारहरू प्रबन्ध गर्न सक्दैनौं गुगल रिडर, मलाई पढ्नुहोस् संग पनि एकीकरण छ twitter यद्यपि पछिल्लो मैले व्यक्तिगत रुपमा प्रमाणित गर्न सकेको छैन। यी सबै सेवाहरूमा हाम्रो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड राखेर।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » मलाई पढ्नुहोस्: तपाईको डेस्कटपमा गुगल रिडरबाट आरएसएस पढ्नुहोस्
उबुन्टुमा भण्डारहरू थप्न अर्को तरिका टर्मिनलमा टाइप गरेर हो: sudo add-apt-repository ppa:atareao/atareao
शिरोलाई जवाफ दिनुहोस्
ठ्याक्कै, टिप को लागी धन्यवाद। के हुन्छ त्यो यो हो कि मैले यो कहिले पनि गर्दिन, किनकि "गैर-उबन्टु" मा ।deब वितरण यो विधि सामान्य रूपमा काम गर्दैन। यो स्रोत.सूचीमा लाइनहरु लेख्न अधिक मानक छ।
किनकि तपाईं काममा जानुभएको छ, तपाईंले यसको अन्य अनुप्रयोगहरूको उल्लेख गर्नुपर्दछ, एकै पटकले तपाईंलाई दुई स्थानहरू गर्न अनुमति दिन्छ, र फ्रेयाचेस र्याम मेमोरी कन्ट्रोल स्क्रिप्ट
मैले वास्तवमै एटारेओ लि link्क राखेको छु किनकि त्यहाँ आधिकारिक प्याकेजहरू छन्, तर मैले म्यानुअल रूपमा .deb स्थापना गरें। पीपीए जाँच गर्दै मैले देखें कि उनीहरूसँग अन्य उल्लेखनीय अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाईले उल्लेख गर्नु भएको छ, त्यसैले आजको एक दिन म तिनीहरूको प्रयास गर्छु र टिप्पणी ब्लगमा छोड्छु।
म जान्न चाहान्छु कि यदि यो गुगल रिडरको साथ सिंक हुन्छ भने
यदि मैले गर्दिन भने, कार्यक्रमको उद्देश्य हुँदैन, मलाई लाग्छ। जे भए पनि, यो र Liferea ले तपाईंको लागि काम गर्दछ।
भीडको लागि मैले आधा व्यक्त गरें (माफी मागे)।
म एउटा ग्राहकको लागि खोज्दै थिए जुन यो फोल्डरबाट अलग गरिएको होस् जस्तो मेरो गुगल रिडरमा छ।
Liferea मैले यो परिक्षण गरें र यसले सबै फिडहरूलाई वर्णमाला क्रममा राख्दछ।
आह मैले बुझें, किनकि म तपाईंलाई निश्चित रूपमा भन्न सक्दिन .. म साच्चिकै मलाई लाग्दिन।